Maxaa ka jira in dad shacab ah si bareer ah loogu dilay Gaalkacyo? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxaa ka jira in dad shacab ah si bareer ah loogu dilay Gaalkacyo?
Saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in Ciidamo ka tirsan kuwa amniga Maamulka Galmudug ay dad shacab ah ku dileen Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, hayeeshee waaxa wararkaas ka hadashay Galmudug.
Wasiirka Warfaafinta dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Shire Falagle ayaa beeniyay wararka sheegayay in Ciidanka amniga ay si bareer ah u dileen shacab ah oo looga shakiyay amni darro , wuxuuna ku tilmaamay wararkaaas kuwo been abuur ah.
Waxaa uu sheegay Wasiir Falagle in aysan jirin sabab keeni karta in laamaha amniga Magaalada Gaalkacyo ay si bareer ah u dilaan shacab ah oo waxba galabsan, isagoo tilmaamay in arritaas aysan aqbaleyn.
“Meeshii la tuhmo uun bay ciidanka amniga gelayaan, meel ay kala kulmeen iska caabin ama xabado inta leesku riday ay dad ku dhinteen ma ay jiri, Meelaha ku talagalka loo gelaayo waxa ay aheyd meelo tuhun ka jiray, iska caabin iyo xabadana kama dhicin” ayuu yiri Wasiirka warfaafinta Galmudug.
Isaga oo sii hadlaayay Wasiirka ayuu tilmaamay in laamaha amniga ay howlgalo kala duwan ka wadaan koonfurta Magaalada Gaalkacyo, si loo xaqiijiyo amniga Magaalada, shacabana looga baahan yahay inay la shaqeeyaan laamaha amniga.
Si kastaba Gaalkacyo ayaa jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay qarax is-miidaamin ah oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, isla markaana halkaas ay ku geeriyoodeen Saraakiil Ciidan iyo dadweyne shacab ah oo ku sugnaa hal goob.
Dowladdo ka tirsan Yurub oo ku heshiiyay in la furo xuduudka biyaha Badda
Madaxweynaha Somaliland oo u ambabaxay dalka Jabuuti iyo ujeedkiisa